Fiber breakage: astaamaha, sida loo daaweeyo iyo waxyaabo kaloo badan! | Ragga Stylish
Fiber jabku waa dhaawac aad u badan oo soo gaara dadka sameeya nooc ka mid ah isboortiga, kaas oo waxay dhacdaa marka muruqu jeexmo dhaqdhaqaaq aan habboonayn awgeed.
Muruqyadu waxay ka kooban yihiin fiilooyin ay jabi karaan culeys xad dhaaf ah, tilmaam xasaasi ah, ama kuleyl ku filan ama fidin tababarka ka hor. Waxa kale oo sababi kara muruqyada daciifka ah ama dhaawacyo hore oo aan fiicnayn. Laakiin muhiim maahan in la sameeyo isboorti si dhaawacani u soo gaaro. Waxay dhici kartaa inta lagu jiro waxqabadka hawl maalmeedka caadiga ah.
1 Astaamaha lagu garto jabitaanka fiberka
2 Ma laga hortagi karaa?
3 Waa maxay daaweynta?
3.4 Faashad isdabajoog ah
4 Soo celinta
Astaamaha lagu garto jabitaanka fiberka
Kuwa dhibaatadu soo gaadhay waxay si fiican u garanayaan taas jabitaanka fiber ayaa lala xiriiriyaa xanuun daran. Muruqyada ay dhibaatadu soo gaadhay waxay dhaawici karaan labadaba nasashada iyo markay isku dayayaan inay dhaqdhaqaaq sameeyaan. Taasi waa sababta ay u jirto awood darro guud oo la isticmaalo. Dareemaha dareemayaasha dillaacay ayaa qayb ahaan mas'uul ka ah xanuunkaan.
Fibre jabka ku dhaca kubka ayaa sidoo kale loo yaqaan dhagax. Waana in dareenka (iyo mararka qaarkood xitaa dhawaaqa) uu la mid yahay dharbaaxo. Inta badan waxaad jeceshahay waxa ay dareemi karto haddii qof uu wax kugu tuuro isagoo awood ku leh murqaha.
Guduudasho, barar, nabarro (waa in la ogaadaa marka lagu daro fiilooyinka iyo xididdada dareemayaasha, xididdada dhiigga ayaa sidoo kale jajaban) iyo dareen daciifnimo oo muruqa ah ayaa sidoo kale lagu daray astaamaha dhaawacan muruqa ah.
Ma laga hortagi karaa?
Waxaa jira caadooyin isdaba joog ah oo kaa caawin kara inaad si weyn u yareyso fursadaha kugu soo dhaca febarka, labadaba tababarka iyo nolol maalmeedkaaga. In kasta oo aad u badan tahay inaad horey u taqaanay iyaga, haddana weligood dhib malahan inaad xusuusato. Intaa waxaa dheer, kuwani waa talooyin waxtar u leh ka hortagga ma aha oo kaliya dillaaca fibrillar, laakiin dhaawac kasta guud ahaan:
Diirimaad kahor jimicsiga
Kala bixinta jimicsiga ka dib
Fidinta maalin kasta
Haddii aad u maleyneyso in jabka fibreerka ay noqon karto mid daran (Caawinaada caafimaad ayaa lagama maarmaan ah haddii aad qandho leedahay, dillaac furan oo daran, ama muruqu leeyahay barar weyn) aad cisbitaal sida ugu dhaqsaha badan si dhakhtar u ogaado heerka dillaaca iyo daaweynta lagama maarmaanka ah. Qeybta dambe waxaa ku jiri kara xargaha iyo curyaamiyaal, iyo waliba layliyo dhaqan celin ah oo kaa caawinaya inaad bogsato. Xaaladaha qaarkood xitaa waa lagama maarmaan in la isticmaalo qalliin si loo hagaajiyo ilmada.
Waxa ugu horreeya ee sida caadiga ah la sameeyo ayaa ah in baraf la dhigo (had iyo jeer lagu duubo tuwaal) muruqa ay dhibaatadu soo gaadhay. Waa dawo sidii hore maadaama ay waxtar leedahay. Sababta ayaa ah, marka laga soo tago u shaqeynta sidii xanuun joojiye, waxay ka caawineysaa xakameynta bararka iyo dhiig baxa maxalliga ah, gaar ahaan isla markiiba ka dib jabitaanka fiber. U mari 20 daqiiqo 1-2 saacadood kasta.
Nasashada waa waji aad u muhiim ah oo daaweyn ah. Murqaha muruqa ayaa dib u dhigi kara soo kabashada, laakiin inaad iska ilowdo gabi ahaanba waxay sidoo kale dhaawici kartaa bogsashada saxda ah. Waxaa loo tixgeliyaa in waxa ugu fiican ay tahay in la helo barta dhexe, in kasta oo had iyo jeer ay lagama maarmaan tahay isku day inaad iska ilaaliso waxqabad kasta oo xanuun kugu keenaya. Muddadu way kala duwan tahay iyadoo kuxiran heerka jabitaanka. Dhinaca kale, kor u qaadida aagga dhaawacan kor u kac inta lagu jiro wejigan ayaa faa'iido leh maadaama ay ka caawineyso yareynta bararka.
Si looga caawiyo yareynta xanuunka la xiriira jabinta fiber, dhakhtarkaagu wuxuu kuu qori karaa daawooyinka nonsteroidal anti-inflammatory, sida ibuprofen ama naproxen.
Faashad isdabajoog ah
Faashadda riixa waxay yareysaa bararka. Waxay sidoo kale bixiyaan taageero muruq ah, waana sababta ay dadka qaar u geliyaan isla markiiba dhaawaca ka dib haddii ay u baahan yihiin inay sii wadaan isticmaalka muruqa. Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan dhejin, waxaa lagugula talinayaa inaad sugto ugu yaraan 72 saacadood si aad ugu ogolaato waqtiga wareegga dhiiggu inuu ku fiicnaado aagga. Kuleylka (laakiin waa marka bararku yaraado) inta badan waa qeyb ka mid ah daaweynta fiiq jabinta sidoo kale.
Si aad dib ugu isticmaasho murqaha ku dhacay ilmada, waxaa lagama maarmaan ah in la sugo illaa inta xanuunku si weyn uga soo hagaagayo. Waxay ku bilaabmaysaa iyadoo lagu samaynayo fiditaan horumarsan oo leh muruqyada ay dhibaatadu gaadhay iyadoo isha lagu hayo dhamaadka nolosha caadiga ah waqti cayiman ka dib. In kasta oo raaxo-darradii badnayd la waayey, haddana waxaa aad muhiim u ah in xoog loo kordhiyo xoogaa yar si aan muruqa u xanuunsan.
Xaqiiqdii waxaad maqashay waqtiyo aan la tirin karin oo ku saabsan wararka isboortiga ee ah in ciyaaryahan kubada cagta ah uu seegi doono kulanka soo socda sababo la xiriira jeex jeexjeex ah. Waqtiga bogsigu wuu kala duwanaan karaa iyadoo kuxiran arrimo badan, sida heerka jeexitaanka (mid fudud, dhexdhexaad ama daran) iyo da'daada. Sidan oo kale, waxay qaadan kartaa meel kasta oo ka bilaabanta 8-10 maalmood illaa in ka badan saddex toddobaad. Laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah, iyada oo loo marayo dhaqan celin habboon (tixgeli inaad isku dhiibto gacanta dhakhtarka jirka), dadka badankood waxay ka soo kabtaan firirb ka buuxa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fiber jajab